Zinedine Zidane Oo Is Casilay – Heemaal News Network
Tababaraha reer France ee Zinedine Zidane ayaa iska casilay Real Madrid kaddib xilli ciyaareed koobab la’aan ku soo dhamaaday oo ay kooxdaasi kusoo dhamaysatay si dhibaato badan.
Zinedine Zidane ayaa la filayay in uu go’aan ka qaato mustaqbalkiisa, kaas oo horeba loo sii sheegay in uu ciyaartoyda kooxda ku wargeliyey in uu tegayo markii ay soo dhamaatay ciyaartii Chelsea ee semi-finalka Champions League.
Sida uu hadda xaqiijiyey wariyaha aadka loogu kalsoon yahay ee Fabrizio Romano oo Talyaani ah, Zinedine Zidane ayaa go’aan ku gaadhay in uu iskaga tago Real Madrid, isla markaana uu go’aankiisa ku wargeliyey Madaxweyne Florentino Perez.
Wariyaha ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka, waxa uu ku sheegay in Zinedine Zidane uu go’aan kalidii ah gaadhay, kooxduna ay mar dhow si rasmi ah u xaqiijin doonto bixitaankiisa.
Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkan ku dhamaysatay kaalinta labaad ee horyaalka LaLiga iyadoo laba dhibcood ka dambaysay Atletico Madrid oo koobka qaadday, waxaana sidoo kale ay ku hadheen semi-finalka Champions League oo ay ku soo garaacday Chelsea.
Los Blancos ayaa sidoo kale waqti hore ka hadhay tartanka Copa del Rey oo ay kooxda heerka saddexaad ee Alcoyano ay ku garaacday, halka Supercopa de Espana ay semi-finalkii ku reebtay Athletic Bilbao, sidaas ayaanay dhamaan afartii koob ee ay u tartameen ay koobab la’aan uga noqdeen.
Madaxweyne Florentino Perez ayaa la sheegay in uu doonayay in Zinedine Zidane uu sii joogo, siina ahaado tababaraha kooxda ee xilli ciyaareedka dambe, laakiin uu tababaraha reer France go’aansaday in uu markii labaad iskaga tago kooxda.
Shacabka Jabuuti Oo ka Cabanaya Amar ay Dowladdu kusoo Rogtey.